Advantista vaovao, Shine sy ny hafa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Maro ireo fiangonana sokajiana ho zandriny ary hambara ihany koa hoe sekta no hita eny anivon’ny fiarahamonina. Hitantsika nameno ny kianjan’ny Coliseum ao antsonjombe ny fiangonana Vahao ny oloko, indray asabotsy iny, volana vitsy izay. Nisy nanaraka azy tato aoriana fa toa tsy nitovy ny fahombiazana. Ireo trano malalaka eny amin’ny fokontany dia betsaka no ampiasain’ny antokom-pivavahana samihafa.
“Raha ny teto amin’ny fokontaninay izao dia efa nisy an’izany fianakaviana nifampitana tamina fiangonana Pantekotista” hoy ity lehilahy iray. Nazavaina fa isaky ny alahady dia mifaninana mampiasa fanamafisam-peo ilay tokantrano sy ilay fiangonana. Ilay fiangonana aloha no teo talohan’ilay tokantrano e. Izany hoe efa tokony nahafantatra ilay nividy ilay trano fa isaky ny alahady tontolo andro dia miasa mafy ny fanamafisam-peo ao amin’ilay fiangonana. Tsy naharitra ny ady fa niala ilay tompon-trano fa ilay fiangonana mbola ao manohy ny asany ary tsapa fa nihena ny herin’ny fanamafisam-peo.
Fa tato anatin’ny andro vitsivitsy izay dia tsapa fa maromaro ireo vaovao momba ireo antokom-pinoana samihafa ary samy hafa ireo.
Ny faran’ny volana okitobra teo izao dia nisy fanambarana fa mitsangana izany SDARM izany na Seventh Day Adventist Reform Movement na Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito Fihetseham-panavaozana. Tsy mankasitraka ny fomba arahin’ny advantista hono izy ireo ka miverina amin’ny loharano nipoiran’ny advantista. Nanangana fiangonana vaovao izany ary efa tanana roa no misy azy ireo eto Madagasikara dia ny ao Mandroseza sy any Toamasina. Ambaran’izy fa efa tany amin’ny volana febroary 2014 teo no tonga voalohany teto Madagasikara ity fihetseham-panavaozana ity.
Isan’ny hita sy tsapa koa tao ho ao dia misy fotoana maro ao amin’ny televiziona no ahitana fandaharana resaka fitoriana. Misy vahiny ary adika amin’ny teny malagasy ny resany. Fa misy koa pasitera mivady malagasy miteny malagasy avy hatrany, mifandimby na miaraka mitory. Isan’izany ny mpanorina ny fiangonana Shine. Isan’ny ahitana azy ny ao amin’ny televiziona TvPlus. Vidiana moa ireny fotoana ahitana azy ireny fa tsy midika fa an’ny Shine akory ny TvPlus… Tsetsatsetsa tsy aritra no ampahatsiahivana fa nisy fotoana nilazana fa ana antokom-pivavahana avy any ivelany ny TvRecord.
Ankehitriny dia hita fa manemitra ny rindrina ao Antananarivo ny afisy milaza fa manana vahiny ny fiangonana Shine. Ary hampiasa ny Palais des sports et de la culture ity antokom-pivavahana ity. Mandritra ny efatra andro. Manomboka ny 20 novambra izany ary mifarana ny 23 novambra. Maraina sy hariva. Tahaka ny mahazatra an’ireo antokom-pinoana ireo moa dia vavaka, fanasitranana, no teny entin’izy ireo mambabo ny olona ho avy. Io fotoana io dia natokan’ity fiangonana ity ho fanamarihana ny fahafolo taonany.
Ny antokom-pivavahana fahatelo hita sy re tao Antananarivo dia antokom-pivavahana miaraka amin’izany pasitera Chris Oyakhilome. Vao mitsangana mihitsy izy ity Christ Embassy ity ary ny Cemes ao Betongolo ao no ampiasainy. Nizara boky vita printy tsara tarehy teny Antaninarenina no nahitana azy ireo nampahafantatra ny fijoroany. Boky vita amin’ny teny malagasy, na teny frantsay na koa teny anglisy. Nozaraina maimaim-poana. Ny fanombohan’ny volana novambra teo no nahitana izany.
Samy manana ny tetika hambabony ny fon’ny olona ireo antokom-pinoana ireo. Ao ny fampiasana voambolana “mirefotra” toy ny croisade ny an’ny sasany mbola hamafisina ka croisade internationale, délivrance… Misy koa ny fampiasana ny tekinika eo amin’ny fifandraisana na communication (dokam-barotra, fandaharana manokana amin’ny televiziona, mampiasa écran géant rehefa vory vahoaka, afisy, sns.). Tsy misaraka amin’ireo antokom-pinoana ireo ny fanamafisam-peo ary ampiasaina mafy izany. Eo koa ny fahaizan’ireo mpitarika antokom-pinoana mikabary na mandaha-teny angamba no mahalaza ny tian-kambara. Ao ireo manao izany amin’ny fiteny malagasy ranoray ao ireo manasa vahiny miteny anglisy matetika ary dia mandika ny eto antoerana, fomba iray hisarihana tanora koa io teny anglisy ka asiana fampianarana teny anglisy ao am-piangonana. Santionany ireo tetika ireo.
Santionany amin’ireo fiangonana sy antokom-pinoana mampiseho ny fahavitrihany ireo. Betsaka ireo Epp, na sekoly tsy miankina ireny no ampiasain’ny antokom-pivavahana samihafa rehefa tsy mianatra ny mpianatra. Manofa trano izy ireny. Fidiram-bola fanampiny ho an’ilay sekoly izany no tsy manangana trano ilay antokom-pivavahana fa mionona amin’ny fampiasana izay trano efa mijoro.
Isan’ny hampiasa ny Coliseum ny mpanankanto iray ato ho ato. Maimaim-poana ny fidirana amin’izany fety izany. Fiderana an’Andriamanitra ny azy. Tsy fantatra mazava izay antokom-pivavahana miara-dia aminy na manampy azy amin’izany.
Inona no dikan’ny firoboroboan’ireny fiangonana ireny ? Very fanahy mbola velona ve ny Malagasy ? Sa tsy mahasarika ny fiangonana miaraka ao anatin’ny FFKM ka isan’izany ny EKAR ? Saro-baliana izany. Teny natao isarihana ny sain’ny rehetra.
Chronique de Razaf : Il y a plus urgent - il y a 4 mois
Matoan-dahatsoratra : Misafotofoto sy mifamahofaho ! - il y a 6 mois